OB / GYN Columbus, OH Dr. Carrie Soder
Carrie Soder, MD
La kulan Dr. Carrie Soder
Carrie Soder, MD waxay ku soo biirtay Xirfadlayaal Caafimaadka Haweenka bishii Ogosto 2005 kadib markay dhamaysay tababarkii umulisada iyo cudurada haweenka ee Jaamacada Ohio State. Tababarkiisa waxaa ka mid ah uurka caadiga ah iyo halista sare, ultrasound-ka dhalmada iyo cudurada dumarka, qalliinka weyn ee cudurada haweenka, laparoscopy, hysteroscopy, colposcopy, dhalmo la’aan, iyo caafimaadka guud ee haweenka.
Dr. Soder waxay ka qalin jabisay Jaamacadda Toledo ka dibna waxay ka qaadatay shahaadada caafimaadka Kuliyadda Caafimaadka ee Ohio ee Toledo sanadkii 2001.
Dr. Soder asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa Wapakoneta, Ohio, Dr. Soder wuxuu degan yahay Dublin ninkeeda, Mike, iyo caruurtooda Hunter, Natalie, iyo Mallory. Waxay ku raaxeysataa wareejinta, orodka, safarka, iyo daawashada Buckeyes! Dr. Soder wuxuu waqti ku soo qaatay dalka Malawi, Africa isaga oo la jooga koox adeegayaal ah oo bixisa daryeelka dumarka isla markaana rajeynaya inuu safar kale tago mustaqbalka dhow
Haweeney kasta waa mid gaar ah oo leh baahiyo kala duwan. Dhakhtarkaaga, Dr. Soder wuxuu dareemayaa inay tani tahay fikrad muhiim ah oo la fahmi karo si loo bixiyo daryeelka caafimaad ee ugu fiican lagana caawiyo inaad gaadho go'aanno xog-ogaal ah.
Bixinta daryeelka haweenka ee shakhsi ahaaneed, Dr. Soder wuxuu leeyahay tababar sare oo ku saabsan uurka caadiga ah iyo halista sare, hysteroscopy, dhalmo la'aan, iyo adeegyo kale.